Soo dejisan FFDShow 1.3.4531 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: FFDShow
FFDShow – software ah kelmadaha, riixo ama ka arrinsashada audio iyo video. FFDShow u qaybsan yahay qaybo reserved deсoder maqal ah, video iyo kaanalada interface VFW in ay isticmaalaan dhowr ah oo codecs iyo sida diirada in ay ka shaqeeyaan iyo waxa taageera ciyaartoyda ugu badan. FFDShow u saamaxaaya in ay doortaan set lagama maarmaanka ah ee codecs u isticmaalo, ka dhalaalka oo ka duwan of video ka bedesho, hagaajiyo tayada codka, la shaqeeya subtitles iwm software waxay kaalmeysaa video post-processing si aad u eegto sanamyadii tayo sare leh. FFDShow sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad si ay u isticmaalaan audio shaandheeyaa, barbareysay iyo ooyinka dhisay-in.
Taageerada codecs kala duwan iyo sida diirada
Processing of daran ah, mudadda iyo iftiin ee signal luminance ah
Taageerada qaabab kala duwan subtitles
Ilaalinta tayada Automatic
Soo dejisan FFDShow
Faallo ku saabsan FFDShow
FFDShow Xirfadaha la xiriira